Home Wararka MW Farmajo Iyo RW Kheyre oo Si Xoog ah ku Qabsan Raba...
MW Farmajo Iyo RW Kheyre oo Si Xoog ah ku Qabsan Raba Guddoonka Barlamanka Galmudug
Somaliya waxay ku dhisan tahay awood-qeybsi qoran oo ah 4.5 iyo mid aan qorneyn oo ah in beelaha qaata jagooyinka sarsare inay beelaha kale u daayaan jagooyinka kale. Haddaba waxaa Galmudug iyo Federaalkaba ka muuqata in Farmajo iyo kheyraba ay ku tumanayaan heshiiskaas awood-qeybisiga ee Beelaha Somaliyeed isku hayey intii ka dmbeysay dagaalladii sokeeye. Dowladii Xasan Sheekh Maxamuud aad ayey u ilaalisay awood qeybsiga qoran iyo ka aan qorneyn.
MW Farmaajo waxaa uu amar ku siiyey Kheyre in Carrabey iyo Dr Gacal laga soo saaro beelaha Galmudug oo talada degaankaas gacanta loo geliyo beelaha Murusade oo Seediyaashiis ah iyo Marreexaan sida tan Qaranka ay tahay maanta. Dr Gacal iyo Carrabey waa laba nin oo ay labadooda ilma adeer yihiin Kheyre iyo Farmajo , taasina waxay waddada u xaari doontaa in beelaha kale ee tayada iyo tiradaba ka badan kuwan ay la wareegaan awoodda dalka maalin uun oo ay meesha ka baxdo isku haynta beelaha.
Tusaale beesha Hiraab xelligii ay Madaxweynimada haysay haddii ay wada qaadan lahayd dhamaan jagooyinka waaweyn maanata xaalku sidaan ma ahaadeen. Sidaas darted waa in maanta la ilaaliyaa awood-qeybsigaas qarsoon. Haddii kale dalku wuxuu noqon doonaa hannaan boqortooyo dedban iyadoon la ogeyn noqda oo hal beel ka wada taliso.
Beesha Madar kicis oo leh xildhibaanada uga badan ayaa looga fadhiyaan inay diidaan in Galmudug ay markale baabi’iyaan Kheyre iyo Farmajo oo u diiday Galmudug inay qeyrkood sida Puntland la tartanto. Madar kicis maanta ayey degaankooda u hiillin karaan oo ay dooran karaan dad u dan ah bulshadooda, isla markaana ilaaliyaan awood-qeybsiga beelaha halkaas dega.
Cali Gacal Casir iyo Maxamed Carrabey waa kuwii dhulka la galay Galmudug iyagoo ka shidaal qaadanaya Farmajo iyo Kheyre oo ay isku qabiil yihiin, haddii haddana uu gudoomiyaha Barlamanka noqdo DR Gacal muxuu Cali Gacal Casir ka duwan yahay?, waliba waa khatersan yahay oo waa ka aqoon badan yahay, dhaawac weyn oo aan dib loo celin Karin ayuuna u geysan karaa degaanka. Sidoo Kale Carrabey waa kii aad taqaaneen oo dhibaatada la og yahay u geystay maamulka Galmudug si looga reebo inuu la soo sinmo Puntland oo dersikooda ah oo ay isku degaan iyo duruufo yihiin.
Isku soo duub waa ina aan la ogolaan inuu Dr Gacal ku soo baxo gudoonka Barlamanka lacag kasta ha lagu qaateen, jaga kastasa ha lagu ballanqaadee.
Sabab too ah Dr Maxamed Nuur Gacal waa nin kii u qiil sameynayey markii Cabdiraxman Cabshakuur gurigiisa lagu weeraray lana laayey dhallinyaradii ilaalineysay oo ka soo jeeday degaanka Galmudug. Dhallinyaradaas oo xataa laga yaabo inay qaraabo yihiin xildhibaanda uu codka wax looga dhigayo Gacal uu gacantooda ku jiro. Dhallinyaradaas kabahoodii lagu duugay oo aan ilaa iyo maanta la ogeyn meesha ay ku duugan yihiin.
Sababta uu Dr Gacal u difaacayeyna waxay tahay waxaa uu aaminsan yahay in beesha la jebiyo oo laga dhigo maxaysato si loogu tunto, waana feker ka jira Xamar kaas oo ay wada qabaan Farmajo, Fahad iyo Kheyre. Haddaba maanta looma baahna dagaal iyo gacan ka hadal , waa in dareen iyo doorasho looga aarsadaa oo loo sheegaa in ruux Dr Gacal oo kale ah uusan madax ka u noqon Karin degaan ay u badan tahay beesha uu gabood falkeeda u ololeynayey muddo dheer, walina uu wado. Waxaana la hubaa ruuxa colaad iyo xaq diidnimo intaas la eg u qabaa beeshan haddii awood loogu daro inuu si naxariis darra ah u isticmaali doono, waayo waxaa la saxnaa wixii ina adeerkii Kheyre iyo Seedigii Farmajo ay ka sameeyeen Xamar. Waxaana la hubaa inuu Galmudug ka sameyn doonaan isaga iyo Gaandhariga loo soo wado ee Qoorqoor haddii sarenka dadnimo laga dilo xildhibaanadda codkooda wax badali kara.
Ogow haddii Beesha aysan dhacdadii Xamar is xakameyn lahayn oo aqooyahankeedu, cuqaasheedu iyo siyaasiyiinteeda is dajin lahayn weerarka Cabdiraxman Cabdishakuur wuxuu halis gelin karay dalka oo dhan in dib loogu noqdo colaadihii xanuunka badnaa.
Hadaba xubnaha loo soo xulay Barlamanka Galamudug waxaa la hubaa inay yihiin dad garan kara inay maanta tahay maalin ay awood leeyihiin oo haddii aysan dadkooda ugu daneyn si xaq ah iyaga naftooda loogu iman doono. Xildhibaan sida aad ku timid wax badan ayey ka duwan tahay sida aad ku joogeysid, waa inaad ka shaqeeysid sidii ay sii joogi lahaayeen oo ah dadkooda kalsooni uga kasban lahayd.
RW Kheyre oo si fiican u og in Dr. Gacal uusan lahayn awood hogaamineed iyo mid maamul toona inuu isaga Xamar ka maamulo Galmdug si uu gacantiisa ulu soo Porto Xildhibaanada Federaalka maadaama uu rabo inuu u tratamo jagada Madaxweynenimada dalka 2020/21. Waana Sababta Qoorqoor oo la ogyahay indu shalay ahaa Gaandhari loogu wado Madaxweynenimada Galmudug.
Hadddaba beelihii lagu dulmiyey intii ay socotay hawshaan oo si cad mediyaha maanta waxay fursad u haysataan in xaqooda ku doontaan codkooda. Waayo sababta loo dulmiyey ayaa ahyd in Gacal iyo Qoorqoor la soo saar.